होलीलाई रंगीत र मर्यादित बनाऔं | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
होलीलाई रंगीत र मर्यादित बनाऔं
Published On : ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०९:०१
आज हिन्दू धर्माबलम्बीहरुको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व होली, धुमधामले मनाउने तयारी गरिएको छ । गोरखामा युवाहरुले संगठित रुपले मनाउने तयारी गरेका छन् । सक्दो व्यवस्थित, सभ्य र भव्य बनाउने प्रयत्नमा उनीहरु लागेको बुझिन्छ ।
धेरै चाडपर्वहरु मौलिकता गुमाउँदै आधुनिकतातिर जाँदा संस्कृति पनि बिकृति बन्दै गएको छ । त्यसैले युवाहरुले यसमा चिन्ता गरेर सभ्य, भव्य बनाउनु खोज्नु प्रसंसनीय छ । सबैजसो पर्वका राम्रा मौलिकता, संस्कृति र सन्देश बोकेका हुन्छन् । सबैले यसको मर्म र उद्देश्य नबुझ्दा विकृति बढेको हो । कतिपय पर्व विदेशी संस्कृतिको प्रभावमा पारी मौलिकता नै गुमेको पाइन्छ भने कतिपय पर्व विकृतिको चपेटामा परेका पाइन्छन् । रंगीन पर्व होलीलाई सभ्य, मर्यादित र मौलिक तरिकाले मनाउन सकिन्छ ।
चाडपर्वमा भित्रिएका उच्छृङ्खलता र विकृतिले सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पुग्छ । त्यसैले, होलीको बेला यी कार्य नहोऊन् भनेर सजगता अपनाउनु पर्छ । इच्छाविपरीत कसैको शरीरमा रङ र लोला हान्न कसैलाई छूट छैन । भाङ र गाँजाको नशामा खेलिने होलीले स्वास्थ्यमा असर त छँदै छ, अकल्पनीय दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । होलीका अवसरमा अत्यधिक मादक पदार्थ सेवनका कारण दुर्घटना हुने, लोला हान्ने क्रममा आँखा फुट्ने र अङ्गभङ्ग हुनेजस्ता घटना वर्षे्नि बढिरहेका छन् ।
त्यसैले, यसप्रति सरकार सजग र गम्भीर भई आवश्यक कानून लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको यस्तो कार्यलाई नागरिकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सभ्य समाज निर्माणका लागि पनि आपराधिक मानसिकता र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने काममा सबै लाग्नु जरुरी छ । होलीलाई मर्यादित रूपमा सबैले मनाउने वातावरण बनाउनु हामी सबैको दायित्व पनि हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको पछिल्ला गतिबिधिले बजारबासीलाई केही फरक अनुभूति गराएको छ । बिगत पाँचबर्ष
पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरमा ख्याल गर
भूकम्पीय आपतकालीन सहायता परियोजना अन्तरगत गोरखामा बनेका दुईवटा सडकको काम गुणस्तरहिन भएको पुष्टि भएको